yini i-USB 3.0 HUB? | I-Huachuang Electronic
I-C01 USB-C Adapter
I-C02 USB C Jack Adapter
Amachweba amaningi e-USB-C HUB
I-single Port USB-C HUB
yini i-USB 3.0 HUB?
Ihabhu le-USB 3.0
Izinga le-USB 3.0 elivezwe ngonyaka ka-2008 lithembise ukukhuphuka okukhulu kwedatha yokuqhamuka kwedatha kuqhathaniswa nokwandulelwa ubuchwepheshe i-USB 2.0. Ngenxa yokuthi i-USB 3.0 ihambisana nobuchwepheshe obedlule, amadivaysi amadala asakwazi ukusetshenziswa ngehabhu elisha le-USB 3.0.
Isifinyezo sezinzuzo ze-USB 3.0
I-10x ngokushesha kune-USB 2.0
Phansi kuyahambisana ne-USB 2.0 device
Kungani kufanele kusetshenziswe ihabhu le-USB 3.0?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele usebenzise ihabhu le-USB 3.0. Enye yalezo zizathu ukuthi kufanele ucabange ngekusasa lobuchwepheshe. Ngokuhamba kwesikhathi, amadivaysi wokugcina asekela kuphela i-USB 2.0 ejwayelekile azonyamalala emakethe. Lokhu kubaluleke kakhulu uma ubheka ukuthi sekuvele ukwenziwa okusha, okubizwa nge-USB 3.1 (SuperSpeed ​​+). I-USB 2.0 ngakho-ke iyancipha futhi inganakwa, ngoba ihabhu le-USB 3.0 lingaphatha namadivayisi wokugcina ngobuchwepheshe be-2.0 noma kunjalo. Uma amadivaysi amasha okugcina anokuxhumana kwe-USB ethengiwe, ngokuvamile anikezwa nge-USB 3.0.
Ama-hubs we-USB 3.0 wamanje
I-HuaChuang USB 3.0 4-Port
I-WIWU USB 3.0 7-Port
Uma uthenga ihabhu le-USB 2.0 futhi unemishini yokugcina esekela i-USB 3.0, ungayisebenzisa, kodwa-ke kufanele uyenze ngaphandle kwenzuzo enkulu yejubane le-USB 3.0. Lokho kwenza kungasho lutho kwezobuchwepheshe noma kwezomnotho. Uma ihabhu lizohlanganiswa kwingqalasizinda ekhona, ukukhetha kwe-USB 3.0 hub kunconyelwe kakhulu.
Kushesha kangakanani ukudluliswa kwedatha ngehabhu le-USB 3.0?
Izinga lokudluliswa kwehabhu le-USB 3.0 liya ngezici ezimbalwa. Ukuze uzuze ijubane elikhulu kakhulu lokudluliswa kwedatha, kubalulekile ukuthi zonke izakhi namadivayisi abandakanyekile asekele i-USB 3.0 ejwayelekile. Isibonelo, ukuze ushayela i-hard drive yangaphandle ukuze uzuze ukusebenza okuphezulu ngesikhathi sokubhala nokufunda, imbobo ye-USB ebhodini elikhulu, ihabhu le-USB kanye ne-hard drive yangaphandle kumele yakhelwe ngokucacile i-USB 3.0. Lokhu kungabonakala ezintweni ezihlaza okwesibhakabhaka ngaphakathi kwe-plug kanye ne-USB Slots.
Kwenzekani uma ngixhuma idivaysi ye-USB 2.0 esithunzini se-USB 3.0?
Ngokomqondo, akukho okungenzeka okungalimaza ihabhu le-USB 3.0, idivaysi yokuphela noma ibhodi enkulu. Kodwa-ke, kufanele uphile ngokwehla kwesivinini esikhulu uma enye yezinto ezishiwo ingasekeli i-USB 3.0.
Ingabe kukhona ihabhu le-USB 3.0 elinikeza uhla olukhethekile lwemisebenzi?
Kukhona ihabhu le-USB 3.0 elinjalo. Izinhlobo ezahlukene ziyatholakala. Abanye basekela i-WLAN, abanye babe nesifundi sekhadi esihlanganisiwe ngakho-ke asisebenzi nje njengento esezingeni lokuxhumana phakathi kwamadivaysi e-USB, kodwa futhi njengendawo yokulawula yokufunda amakhadi we-SD.
Isikhathi sokuthumela: Jun-29-2020
Vula: 8:00 AM - Vala: 22:00 PM
Yiba uchwepheshe ngoba uzinikezele, usikhetha, ukhetha insizakalo ehlukahlukene yeseva.Our yethu ihlinzeka ngezixazululo zomhlinzeki we-R&D, design, ukukhiqiza kanye nezinsizakalo zokuthengisa.
Isithasiselo: Isikhungo se-Wanfeng Innovation Center, umgwaqo we-1048th 358 Provincial Provincial, Shatou Area, Chang'an Towm, Dongguan City, eGuangdong, China.
yini i-USB3.1 HUB?
I-HDMI iletha ini kithi?
yini i-HDMI 2.1 Ukucaciswa;
I-USB Type-C Isixhumi isebenza kanjani kwi-HDMI Al ...
Bhalisela okwethu Incwajana yezindaba ye-USN Life bese uthola ivawutsha engu-10%